Caffeen gabaasa raawwii hojii Mana Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa raggaasise – Fana Broadcasting Corporate
Finfinnee, Adoolessa 8,2011(FBC)- Caffeen Oromiyaa gabaasa raawwii hojii Mana Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa 2011 fi kallattii hojii bara itti aanuu dhaggeeffatee irratti mari’achuun raggaasise.
Oodiitarri muummichaa obbo Elemaa Qaampheen gabaasa dhiyeessaniin, bara baajataa 2011tti manneen hojii 520 irratti odiitii gosota adda addaa gaggeessuuf karoorfamee 474 (%91) raawwatamuu ibsaniiru.
Hordoffii hojiirra oolmaa yaada odiitiin walqabatee herreega bara baajata 2005 – 2010 kessatti argannoolee odiitii maallaqaan akka sassaabamu yaanni itti kennamee ture kan akka baasii seeraan alaa, kuufama herreega galii gibiraa fi taaksiif kkf ilaalchisee manneen hojii 163 keessatti hordofamee Birrii 628,013,672 keessaa Birrii 93,589,696.00 (%15) kan sassaabame yoo ta’u, kan hafe Birrii 317,464,628 (%85) irratti tarkaanfiin kan hin fudhatamne ta’uu gabaasichi ni ibsa.
Argannooleen herreega baasii ragaa malee, ragaa guutuu malee, herreega walitti qabamaa fi qimxoon argaman ragaan guutuu fi sirrii ta’e dhiyaatee fi akka bu’u yaanni odiitii itti kenname Birrii 2,452,744,517 hordofame keessaa Birrii 1, 330,490,787 (%54) irratti tarkaanfii fi sirreeffamni kan taasifame yoo ta’u, %46 hafe irratti tarkaanfiin fudhatame kan hin jirre ta’uun ibsameera.
Akkasumas, argannoo raawwii seeraan alaa badiinsa ykn qisaasama maallaqaa manneen hojii mootummaa 90 keessatti tarkaanfiin akka fudhatamuuf yaanni kenname Birrii 1,019,080,109 keessaa Birrii 555,319,283 (%54) irraa tarkaanfiin kan fudhatame ta’us kan hafe %46 ta’u irratti tarkaanfiin kan hin fudhatamne ta’uun ibsameera.
Manneen hojii 65 keessatti hanqinoota hojimaataan akka sirreeffaman taasifamaniif yaanni odiitii kenname Birrii 516,948,49 keessaa Birrii 262,876,767 (%51) kan sirreeffame ta’us %49 hafe kan hin sirreeffamne ta’uunis ibsameera.
Karoora Bara 2012 keessattis, manneen hojii mootummaa qabeenya guddaa sochoosanii fi sodaa olaanaa qaban naannoo hanga aanaatti jiran 540 ta’an irratti tajaajila oodiitii gosoota adda addaa kennuuf karoorfatee kan jiru ta’uu ibsaniiru.
Fooramiin qindoomina qamolee haqaa hundeeffame
Obbo Ammahaa Makoonnan ‘mirga namoomaa fi olaantummaa seeratiin’…
Haasaa MM Dr Abiy sirna badhaasaa Noobeelii Nageenyaarratti taasisan(afaan…
Waldaan Namoota Rakkoo Guddina Sammuu Qabanii fi Diibooraa Faawundeeshin daawwataman